Ungaba njani omnye wabathengisi abaphezulu kwi-Amazon?
Mhlawumbi akukho ngxoxo malunga nendlela yokuba ngabanye abathengisi abaphezulu kwi-Amazon babeza kuqonda ngaphandle kwengxenye ebalulekileyo yempumelelo ye-ecommerce eyaziwa njenge-automation. Ngezantsi ndiza kuhamba ngokukhawuleza ngeendlela ezintathu ezinamandla zokuzenzekelayo kwi-Amazon - kunye nophando lwegama elingundoqo lemveliso kunye nokuhlaziywa kwemveliso efunekayo ukuze uzibonise udweliswe phakathi kwabathengisi abaphezulu be-Amazon.
Uphando lwegama elingundoqo
Umbuzo malunga namazwi angundoqo kunye nendlela yokuwafumana mhlawumbi ikhupha umbandela wabathengisi be-novice e-Amazon, ngakumbi abo kutshanje kudluliselwa kwi-SEO yangaphambili kwi-Google yophando. Uqwalasela ukuba akukho ncwadana yokuphambuka yegama eliphambili kwi-Amazon, impendulo emfutshane kukuba unokwenza ngoku ngesandla ngamaphuzu alandelayo:
Sebenzisa i-Google Keyword Planner ukuchonga igama eliphambili legama eliphambili.
Faka igama elingundoqo kwi-bar yokukhangela yemveliso kwi-Amazon.
Jonga iziphakamiso zokukhangela ukubheja umfanekiso omkhulu weemeko zakho.
Njengoko usenokuba uqikelele, ukwenza loo nto kuyakuba ngumsebenzi omkhulu kakhulu, kwinto enye yegama elingundoqo okanye ibinzana elide elisetyenziswe ngabadayisi bokukhangela abaphezulu kwi-Amazon. Ngoko, yintoni enokuyenza naleyo? Ukuqwalasela ngokuzenzekelayo, ndinokucebisa ukusebenzisa elinye lezinto ezilandelayo zezinto zokuphanda ngegama eliphambili kwindlela eya ekubeni ngumthengisi ophumelelayo ngaphaya kwalo:
I-KTD i-Amazon Keyword Tool Unokukunceda ngisho nangamacebiso okukhangela ngegama elingundoqo. Isebenza ngokulula ngokubuza imibuzo efunyenwe ngokuzenzekelayo ebhokisini lokukhangela lwe-Amazon yonke i-niche kunye nemveliso ehambelana nemveliso oyifunayo.
Iimpawu zentengiso yomthengisi - enye enye indlela ye-premium ukukunceda ngegama elingundoqo elingundoqo kwi-Amazon. Into yokuba le sixhobo idibanisa yonke idatha kunye kuphela kwi-Amazon ngokwayo, kodwa isebenzisa inkqubo ekhupha idatha ukusuka kwiinjini ezinkulu zophando (njenge-Google ngokwalo, kunye ne-Yahoo kunye ne-Bing). Ngaloo ndlela, iinqununu zeMarchant zisebenzisa i-algorithm ukudibanisa imibuzo ekhangelekayo kwi-Amazon kwaye ikunike ukuqikelelwa kweendlela ezithandekayo. (8)
Ndikholelwa ukuba bonke abaphumelele ukuphumelela iBhokisi lokuthenga kwi-Amazon ubuncinane ubuncinane bexesha eliye laqalisa ukusebenza le ngxaki. Ndiyathetha ukuba nayiphi na umncintiswano osondeleyo unokuhlala usebenzisa amaqhinga afanayo ukukhupha izihlomelo zakho kwaye ubonakale phakathi kwabathengisi abaphezulu abaphezulu kwi-Amazon Thenga Ibhokisi - ngokukugqithisa ngesixa esincinci ukuba ubeke phambi kwakho. Yaye yilapho izixhobo zokuhlaziya izixhobo ziza kudlala. Ndincoma ndincoma ukuzama ukuhlaziya i-Repricer Express phambi kwayo nayiphi na into. Esi sixhobo sinesibonakaliso esilula kakhulu, sibe phakathi kwezixhobo eziphendulela kakhulu kunye nezindleko ezinkulu ezikhoyo kwiimarike kwangoko. Ingaba isebenza kanjani? Beka ngokukhawuleza, esi sixhobo sifanele-ukuba unayo uluhlu lwemveliso ezininzi okanye iimveliso ezininzi ezithengiswa kwi-Amazon. Enyanisweni, akukho nenye indlela yokuhlala phezulu kwintcintiswano ye-cutthroat e-Amazon ngaphandle kwesofthiwe esetyenziswe kakuhle. Ingakumbi - esi sixazululo sisoloko siphakathi kwam namacebiso angcono, ikakhulu ngenxa yokuba inexabiso lenyanga nganye, ngaphandle kwecala elidityanisiweyo elisekelwe kwikhomishini.